“Salaadiinta Bariga iyo kuwa Galbeedku Xadhiga Way u siman yihiin,Qaarna Yaan La Naas-Nuujin.Qaarna……Xildhibaan Dheeg. |
“Salaadiinta Bariga iyo kuwa Galbeedku Xadhiga Way u siman yihiin,Qaarna Yaan La Naas-Nuujin.Qaarna……Xildhibaan Dheeg.
Hargeisa(GNN):-Xildhibaan Maxamed Maxamuud Yaasiin (Dheeg) oo Ka tirsan Xildhibaanada Aqalka Golaha Guurtida somaliland ayaa Xukuumada u soo jeediyay inaan Hantida umada Shaqsiyaad dano gaar ah laga leeyahay lagu naas-nuujin,waxaana uu ka soo horjeestay Wareejinta Haamaha.
Xildhibaanka ayaa canbareeyay Xadhiga Loo gaystay Salaadiinta isaga oo Soo jeediyay in Madax dhaqameedka dalka somaliland bari iyo Galbeedba Ay siman yihiin,Balse aan Ku bari la Jeclaysan.
waxa uu Walaac ka muujiyay Xaalka uu dalku ku sugan yahay,isaga oo Rajo Xuman Kaga Fal Celiyay Cashuuraha Bariga oo Hadana la Doonayo in iyagana La madax banaysiiyo waxaana uu yidhi.
“Dadku Birma Gaydo ayuu leeyahay,Waligiina waa uu lahaan jiray,hadii lagu magacaabo Suldaan,Boqor iyo Caaqil waxa ay lahaan jireen
xasaanad,waxaana lagu xidhi jiray oo kaliya Laba Qodob oo kala ah,Somaliland Diid isaga oo ka qayb galaya shirarka somaliland lidiga ku ah ama isaga oo dhiig faraha kula jira ama cid dhiig gashay uu lasoo safto isaga oo Nabad Galiyada Khal-khal Galinaya,Laguma Xidhi jirin inuu wax ka soo horjeesto oo uu diido waxaan umada dan u ahayn ee shaqsiyaad kale dan u ah.
Intaas waxa uu ku daray Xildhibaan Dheeg oo hadalkiisa siiwata.”Boqor Raabi oo kalaa hada waxa lagu xidhay banka Qool Caday waa la xidhayaa oo waa La oodayaaye ee ka guur,waxa uu ku jawaabay afarta Jihaba wixii iga xigay way oodan yihiin ee kuwaas markaad soo furtaan ana waan ogolaan doonaa,ana waxaan leeyahay dawladeey hortu dhulka gacantaad ku soo celi,hadaanu dhulba gacanta kuugu jirin Guriga aan daganay xagaan uga Guuraa.
Xukuumada waxa uu ku dhaleceeyay in Ay Labada Salaadiin ku xidhay waxaan Caqliga umadu aanay ka dhaadhici Karin oo u Muuqda Mid Dan laga leeyahay,isaga oo Si deg-deg ahna Xukuumada ugu Baaqay in Ay Xayn daabka Sharciga ku soo noqoto Xoriyadana u soo celiso Labada Madax dhaqameed waxaana uu yidhi.
“Afhwayne ayaa noogu danbeeyay wax qof afkiisa ka yidhaah oo lagu xidho,waxaan odhan lahaa madax dhaqameedka sidaas halaga daayo,waana ay siman yihii ka Bari Jooga iyo ka galbeedka joogaa madax dhaqameedku,Qaarna Yaan laga dhigin Lama taabtaan,qaarna yaan laga dhigin mid lagu ciyaaro oo meesha foosha xun ee dadka laga qan-dhiidhinayo halaga daayo.
Geesta kale waxa uu wax laga xumaado ku masaalay Haamaha Kaydka Shidaalka ee Berbera oo shirkado gaar ah lagu wareejinayo isaga oo Xukuumada Dib u Xasuusiyay Shirkadii total waxa ay shacabku ka dhaxleen in Ay tanina noqon doonto hadaanay xukuumadu ka laabanin waxaana uu yidhi.
“Markaan Xaalka dalka eegay waxaan is idhi,waxa la doonayaa sanadkan iyo Waxan yar ee dawlada u hadhay in ay dhawr boqol oo qof malyan dheer ka dhigato oo ay iyadu dano gaar ah ka leedahay,dadka waa loowada madaxwayne,dadka waa loowada madax,qaarna in madaxwayne lacag lala doono qaarna laga eryo maaha,cashuurigii bariga oo waligeed aan la arag dawlad ka wareejisa Maaliyada ayaa imika la leeyahay cid gaar ah ayaa lasiinayaa,waxa miskiinka laga qaadana in cid gaar ah lasiiyo ogolaan mayno.
Madaxwaynaha somaliland waxa uu faray in talada dalka Marka lagala wareegayo in loogu imaado dal iyo Meelo Aan la wareejin ee fayo,isaga oo Rajo Xumo ka Muujiyay Xaalka dalka hada uu ku sugan yahay.